प्रेमीहरूले आफ्नो पार्टनरको विगतमा हेर्न सक्ने डाटावेस तयार भयो – Sajha Pati
प्रेमीहरूले आफ्नो पार्टनरको विगतमा हेर्न सक्ने डाटावेस तयार भयो
बीजिङ्ग । प्रेम देखि विवाहको यात्रामा धेरै परिवर्तनहरु आउछन् । अक्सर विवाह पछि हामी हाम्रो जीवन साथीका यस्ता अनेकौं बानीहरू चिन्छौ जसबाट हामी अझै अनजान थियौं । यदि बानी राम्रो छ तब राम्रो तर नकारात्मक छ भने नकारात्मक बानीले सबै कुरा बिगार्दछ । यसलाई ध्यानमा राख्दै, चीनको पूर्वी Zhejiang province प्रान्तको एउटा शहरले एक यस्तो प्रकारको पहिलो डाटाबेस सिर्जना गरेको छ जसबाट साथी, प्रेमीहरूले आफ्नो पार्टनरको विगतमा हेर्न सक्नेछन् ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा यदि उनीहरूको पार्टनरसँग घरेलु हिंसाको इतिहास छ भने उनीहरूले डेटाबेसबाट पत्ता लगाउन सक्नेछन् । YIWU शहर प्रशासनले यो डेटाबेस जुलाई १ देखि सबै विवाह दर्ता कार्यालयहरुमा उपलब्ध गराउनेछ । डाटाबेस नगरपालिका अदालत, पुलिस, अखिल चीन महिला संघको स्थानीय शाखा र YIWU को सूचना कार्यालय सहित ६ सरकारी विभागहरुद्वारा तैयार गरिएको छ । सामान्यतया विवाह पछि मात्र पार्टनरको हिंसात्मक प्रवृत्ति पत्ता लाग्छ । यदि हामी पहिले नै यस सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछौं भने मानिसहरूलाई सही साझेदार छनौट गर्न मद्दत पुग्ने छ । यसै सोचको साथ हामीले यस्तो प्रकारको डाटाबेस तयार गरेका छौं।’ अखिल चाइना वुमन फेडरेशनका उपाध्यक्ष झो डानिङ्गले स्थानिय सञ्चार माध्यमलाई बताउनु भएको छ ।
यो डाटाबेसले प्रेमी जोडी वा जीवनसाथीसँग सम्बन्धित शामिल दुव्र्यवहारको मात्र मामलाहरुको डिजाइन गर्न डिजाइन गरिएको थियो, तर अब डाटाबेस अधिक विस्तृत बनाइएको छ । उदाहरणको लागी डाटाबेसबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ कि कसरी सम्बन्धित व्यक्तिले उसको बाबु र भाईबहिनी प्रति व्यवहार गरेको छ । के ऊ हिंस्रक छ ? के ऊसँग घरेलु हिंसाको इतिहास छ ?
डाटाबेसको दुरुपयोग रोक्न र व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित गर्न केहि नियमहरू पनि सेट गरिएका छन् । उदाहरणको लागी यदि एक व्यक्ति आफ्नो पार्टनरको ईतिहासको बारेमा जानकारी चाहान्छ भने उसले प्रमाणित गर्नु पर्छ कि दुबै व्यक्ति वास्तवमै नयाँ जीवनमा जानेछन् । थप रूपमा, यो डाटाबेस वर्षमा दुई पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ र दुई व्यक्तिको बारेमा जानकारी खोजी गर्न सकिन्छ ।
बेरूतमा विस्फोटका कारण ७८ व्यक्तिको मृत्यु, ४००० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते
मुम्बईमा निरन्तर वर्षाका कारण शहर डुबाहरुमा रेड अलर्ट जारीे
कोभीड–१९ को संक्रमणपछि बंगलादेशका रक्षा सचिवको निधन